Thuta Music - Page2of 204 - News and Media
ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍ တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည်
ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍ တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းနှင့်အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဆိုက်၍တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများထီပေါက်ကိန်းရှိသည်၂၀၂၀ ၊နိုဝင်ဘာလတွင်နေ့သားသမီးအသီးသီးအလိုက်ရတနာပုံကိန်းဆိုက်ချိန်မရှိသဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါနက္ခတ်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများထီကံစမ်းနိုင်သည်။အဓိပတိနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ၂၅. ၁၁.၂၀၂ဝဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်၁ဝနာရီမှနံနက်၁ဝနာရီ၃ဝမိနစ်အတွင်းထီးဖြူနက္ခတ်ကိန်းဖြင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ၂၉.၁၁. ၂၀၂ဝတနင်္ဂနွေနေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့)နေ့လည်၂နာရီ၅ဝမိနစ်မှနေ့လည်၃နာရီ၁၅မိနစ်အတွင်းထီကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံများဖြင့်စတင်မှည့်ခေါ်သောမြို့၊ရွာ၊ဒေသများမှလည်းထီဆုကြီးဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့၏ဇာတာခွင်ပါထီပေါက်ကံအားနက္ခတ်ဥယျာဉ်တွင်ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီးဆန်းစစ်နိုင်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည်ဦးဇေယျာကို(နက္ခတ်ဥယျာဉ်)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉ ထီးျဖဴနကၡတ္ကိန္းႏွင့္အဓိပတိနကၡတ္ကိန္းဆိုက္၍ တနဂၤေႏြသားသမီးႏွင့္ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္ ထီးျဖဴနကၡတ္ကိန္းႏွင့္အဓိပတိနကၡတ္ကိန္းဆိုက္၍တနဂၤေႏြသားသမီးႏွင့္ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားထီေပါက္ကိန္းရွိသည္၂၀၂၀ ၊ႏိုဝင္ဘာလတြင္ေန႔သားသမီးအသီးသီးအလိုက္ရတနာပုံကိန္းဆိုက္ခ်ိန္မရွိသျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါနကၡတ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္သည့္ဗုဒၶဟူးႏွင့္တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားထီကံစမ္းႏိုင္သည္။အဓိပတိနကၡတ္ကိန္းျဖင့္ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးမ်ား၂၅. ၁၁.၂၀၂၀ဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္၁၀နာရီမွနံနက္၁၀နာရီ၃၀မိနစ္အတြင္းထီးျဖဴနကၡတ္ကိန္းျဖင့္တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၂၉.၁၁. ၂၀၂၀တနဂၤေႏြေန႔ (တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔)ေန႔လည္၂နာရီ၅၀မိနစ္မွေန႔လည္၃နာရီ၁၅မိနစ္အတြင္းထီကံစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူးေန႔နံမ်ားျဖင့္စတင္မွည့္ေခၚေသာၿမိဳ႕၊႐ြာ၊ေဒသမ်ားမွလည္းထီဆုႀကီးဆြတ္ခူးႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ဇာတာခြင္ပါထီေပါက္ကံအားနကၡတ္ဥယ်ာဥ္တြင္က်သင့္ေငြေပးသြင္းၿပီးဆန္းစစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္အသိေပးအပ္ပါသည္ဦးေဇယ်ာကို(နကၡတ္ဥယ်ာဥ္)၀၉၅၃၉၃၃၄၃၊၀၉၄၀၀၅၀၀၀၀၉
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ရွိေသာ ထင္ရွားေသာ မွဲ႔(၇)မ်ိဳး ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ …
အမျိုးသမီးများတွင်ရှိသော ထင်ရှားသော မှဲ့(၇)မျိုး ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ ရတနာဆံ ကျစ်လို့ခေါ်တဲ့ မှဲ့ရယ်၊ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ရယ်၊ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ်၊ ဘယ်ဘက်မျက်ရည်ခံမှဲ့(ညာရယ် နှုတ်တဆိတ် ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်)၊ ရွှေပိတုန်းစုပ် ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်၊ စံပယ်တင်(ညာဘက်)မှဲ့ရယ် ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေ အတွက်အထင်ကရ မှဲ့(၇)မျိုး ရှိပါတယ် …။ အဲဒီမှာ ရင်ဘတ်အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို၇တနာရွှေအိုး လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီမှဲ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကြွယ်၀ ချမ်းသာလေ့ရှိတယ်၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြား တတ်ပါတယ် …။ နောက်ပြီး သူတို့တွေဟာ အလုပ်ဌာနတွေမှာ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာ ဆင်းရဲရင်လဲ ခနပဲ။ ဆင်းရဲတွင်းထဲ ကျနေရင်လည်းခနပဲ …။ မုချကြီးပွားချမ်း သာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ရတနာရွှေအိုးမှဲ့ … Read more
မိန္းကေလးေတြ အသည္းကြဲၿပီးရင္ပိုလွလာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင်ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း… အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများကို သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် အသည်း ကွဲပြီးရင် အရင်ကထက် ပိုလှလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ-ပြရမယ်ဆိုရင် JB နဲ့ပြတ်ပြီးနောက် Selena Gomez ပိုလှလာတာမျိုးပါ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် အသည်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာကြီးကိုကိုယ်အလေးချိန် ကျ၊ ဝိတ်ကျသွားပြီး အရမ်းကို လှလာကြတာပါ …။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ထင်ကြေး မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာကိုက အမျိုးသမီး (၇၇)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသည်းကွဲပြီးရင် ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာကျသွားတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင် ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ကတော့…. (၁) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုပြင်ဆင်ထားလို့” မိန်းကလေးတွေဟာ အကြာကြီးလက်တွဲလာတဲ့ relationship တစ်ခုနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်စဲတော့မယ် ဆိုရင် အစောကြီးတည်းက ကြိုတင် ပြင်ဆင် … Read more
မင္းေမာ္ကြန္းရဲ႕ တိုင္းျပည္ ပကတိ အေနအထားကို ေရးထားတဲ့ ရဲရဲေတာက္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္
အနုပညာလော ကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် မင်းမော်ကွန်းဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားမလျော့ဘဲ ရပ်တည်ကာ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရဲရင့်စွာ ပါဝင်လျက် ရှိနေတာကို အားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါနော်။ ယခုလည်းသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရဲရဲတောက်ကဗျာတစ်ပုဒ် ထပ်မံ ရေးသားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ “ငါတို့ချစ်သောတိုင်းပြည်..ကိုယ်အိမ်တံခါးကိုဘယ်နေ့လာပြီး..ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးအဖမ်းဆီးခံရမလဲလို့..စိုးထိတ်နေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် ကိုယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်..ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးပြာဖြစ်သွားလေမလား..ပူပန်သောကရောက်နေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် ရပ်ရွာအကျိုးသယ်ပိုးကင်းစောင့်တုန်း..ဘယ်အချိန်ခေါင်းပွင့်သွားမလဲ..ခြောက်ခြားနေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် ကိုယ့်သားသမီးအိမ်ရှေ့ထွက်ဆော့ရင်း..ဘယ်အချက်လေးခွနဲ့အပစ်ခံရမလဲ..ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် ပလက်ဖေါင်းပေါ်လျောက်နေတုန်း..လမ်းကြုံလက်သရမ်းသွားလို့..သေကြရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် တော်လှန်ရေးအတွက်အိမ်ကထွက်..ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းပေါ်တက်ရင်း..အသက်ပေးငိုကြွေးကြရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် မိသားစုတွေမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျ..လူငယ်တွေသွေးမြေခမှ..စားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့သူတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် အကြမ်းဖက်သမားတွေအုပ်ချုပ်ပြီး..ပါးစပ်ထဲရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့..သေနတ်ပြမင်းလုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ် သူခိုးတွေကလူပြန်ဟစ်..သူရဲကောင်းတွေဝရမ်းပြေးဖြစ်..ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးခံရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ..ငါိတို့နေတယ် ခေါင်းကိုပစ်မှခောတ်ကိုပြောင်းမယ်..ဆိုတဲ့သူတွေရှိတဲ့တို့ရဲ့တိုင်းပြည်..ပြည်သူကျွေးတဲ့ထမင်းစားပြီး..ပြည်သူကိုသစ္စာမဲ့သူများသာ..ကောင်းစားတဲ့တို့ရဲ့တိုင်းပြည် ဘုရားငွေပါမရှောင်..ဖြောင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့..ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည် မိုက်တကာ့အမှောင်ထဲ..အနာဂါတ်မဲ့နေကြရတဲ့..ငါတို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့..ချစ်လှစွာသောတိုင်းပြည်မှာ..ငါတို့နေတယ်” ကျော်ကျော်ဌေးလွင် L-ေကတီ ========== အႏုပညာေလာ ကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြအခိုင္အမာနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ မင္းေမာ္ကြန္းဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အားမေလ်ာ့ဘဲ ရပ္တည္ကာ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ရဲရင့္စြာ ပါဝင္လ်က္ ရွိေနတာကို အားလုံးျမင္ေတြ႕ရမွာပါေနာ္။ ယခုလည္းသူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ ရဲရဲေတာက္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ထပ္မံ ေရးသားလိုက္ျပန္ပါၿပီ။ … Read more
(3.3.2021)ညီမလေး ကြယ်စင် သေဆုံး၃၁လမ်း ၃၂လမ်းကြား ၈၄လမ်းမှာ
(3.3.2021)ညီမလေး ကြယ်စင် သေဆုံး၃၁လမ်း ၃၂လမ်းကြား ၈၄လမ်းမှာ သူပုန် မအလတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လက်ချက်ဖြင့် VECမှ ညီမလေးကြယ်စင် နောက်စေ့ကို ကျည်အစစ်မှန်သေဆုံး ထပ်တူဝမ်းနည်းပါတယ်ညီမလေး 是缅甸华人。。 မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်လူမျိုးပါ မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးပါရှင့်。 သူရေးထားတဲ့စာလေးတွေကြည့်ကြပါအုံး ရတနာပုံ တိုက်ကွမ်ဒို clubမှ Dancer ဆရာမ ကနေ့ မနက်တွင် နောက်စေ့ ကျည်ထိမှန်၍ ကျသွားပါပြီ မင်းတို့ကောင်တေကွာ လုပ်ရက်တာ ကမ္ဘာ မကြေဘူး ကွာမန်းလေး ၈၄လမ်း ပစ်ခတ်မှုမှာ ကျဆုံးတာပါ။အေးအေးမြင့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး အ.ထ.က (၂၂) ကျောင်းသူ ဟောင်းမကြယ်စင် (19 နှစ်) ခေါင်းကျည်ထိမှန် ကျ ဆုံး 3.3.2021ခုနက ဆုံးသွားတဲ့အမက ရတနာပုံ တိုင်ကွမ်ဒိုClubမှ Dancer ဆရာမ ပါတဲ့ မကြယ်စင် … Read more
တာမွေတံတားနားမှာ ထမင်းဗူးသွားဝေတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကလေးတွေထဲမှ
တာမွေတံတားနားမှာ ထမင်းဗူးသွားဝေတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ တာမွေတံတားနားမှာ ထမင်းဗူးသွားဝေတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ…အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် ဒီကလေးလေးပါလာတယ် မကြီး..သားမစားရရင်ရတယ်..ကြောင်လေးအတွက်စားစရာတစ်ခုခုသာပေးပါတဲ့… သားရယ်ကြောင်လေးကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးရော..အရမ်းချစ်လို့ခေါ်လာတာလားလို့ပြောတော့.. မဟုတ်ဘူးမကြီး… သားတို့ဆန္ဒပြနေတဲ့..တံဆိပ်ရိုက်တဲ့ဆိုင်နားမှာခဏနားတုန်း..သူ့ကိုလမ်းမှာတွေ့တာ..ဆိုင်ကိုမေးကြည့်တော့စောင့်ရှောက်မယ့်သူလည်းမရှိဘူး..တာဝန်လည်းမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့…သေ သွားမှာစိုးလို့သားခေါ်လာတာတဲ့ အိမ်ကိုခေါ်သွားမှာလားမေးတော့ခေါ်သွားမှာတဲ့တယုတယပွတ်သပ်နေတယ်အထီးလားအမလားမေးတော့မသိဘူးဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားကြောင်ကိုလှန်ကြည့်ကြတော့အထီးလေးပါ… ထမင်းဗူးလေးယူလာပြီးပေးတော့…သူစားမယ့်ပေါင်မုန့်လေးကိုလက်ဝါးလေးပေါ်တင်ပြီးကြောင်လေးကိုကျွေးနေရှာတယ်… ကြည့်ပါဦး…ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲ..GZ လေးတွေရဲ့..ရင်ထဲအသဲထဲမှာလမ်းဘေးကကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့အသက်တောင်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ… ပြည်သူတွေကိုသတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးသူနဲ့ ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကိုင်ပြီး သတ်နေသူတွေသိကြစမ်းစေချင်တယ်… ရင်ထဲစို့နင့်နေတယ်… ကားပေါ်မှာသားလေးအကြောင်းပဲတွေးမိနေတယ်… ဒီနေ့သားလေးရောကြောင်လေးပါ…အိမ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြန်ရောက်ပါစေကွယ်… ချစ်တဲ့..အန်တီလွင်နှင်းဆီလှိုင် တာေမြတံတားနားမွာ ထမင္းဗူးသြားေဝေတာ့ဆႏၵျပေနတဲ့ ကေလးေတြထဲမွာ တာေမြတံတားနားမွာ ထမင္းဗူးသြားေဝေတာ့ဆႏၵျပေနတဲ့ ကေလးေတြထဲမွာ…အသက္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ ဒီကေလးေလးပါလာတယ္ မႀကီး..သားမစားရရင္ရတယ္..ေၾကာင္ေလးအတြက္စားစရာတစ္ခုခုသာေပးပါတဲ့… သားရယ္ေၾကာင္ေလးကိုအိမ္မွာထားခဲ့ၿပီးေရာ..အရမ္းခ်စ္လို႔ေခၚလာတာလားလို႔ေျပာေတာ့.. မဟုတ္ဘူးမႀကီး… သားတို႔ဆႏၵျပေနတဲ့..တံဆိပ္ရိုက္တဲ့ဆိုင္နားမွာခဏနားတုန္း..သူ႔ကိုလမ္းမွာေတြ႕တာ..ဆိုင္ကိုေမးၾကည့္ေတာ့ေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူလည္းမရွိဘူး..တာဝန္လည္းမယူနိုင္ဘူးဆိုလို႔…ေသ သြားမွာစိုးလို႔သားေခၚလာတာတဲ့ အိမ္ကိုေခၚသြားမွာလားေမးေတာ့ေခၚသြားမွာတဲ့တယုတယပြတ္သပ္ေနတယ္အထီးလားအမလားေမးေတာ့မသိဘူးဆိုၿပီးႏွစ္ေယာက္သားေၾကာင္ကိုလွန္ၾကည့္ၾကေတာ့အထီးေလးပါ… ထမင္းဗူးေလးယူလာၿပီးေပးေတာ့…သူစားမယ့္ေပါင္မုန႔္ေလးကိုလက္ဝါးေလးေပၚတင္ၿပီးေၾကာင္ေလးကိုေကၽြးေနရွာတယ္… ၾကည့္ပါဦး…ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြရဲ့ရင္ထဲ..GZ ေလးေတြရဲ့..ရင္ထဲအသဲထဲမွာလမ္းေဘးကေၾကာင္တစ္ေကာင္ရဲ့အသက္ေတာင္တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ… ျပည္သူေတြကိုသတ္ပစ္ဖို႔အမိန႔္ေပးသူနဲ႔ ျပည္သူေတြကိုလက္နက္ကိုင္ၿပီး သတ္ေနသူေတြသိၾကစမ္းေစခ်င္တယ္… ရင္ထဲစို႔နင့္ေနတယ္… ကားေပၚမွာသားေလးအေၾကာင္းပဲေတြးမိေနတယ္… ဒီေန႔သားေလးေရာေၾကာင္ေလးပါ…အိမ္ကိုေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျပန္ေရာက္ပါေစကြယ္… ခ်စ္တဲ့..အန္တီလြင္ႏွင္းဆီလွိုင္
ဒီလိုချစ်သူမျိုးက သင်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ တွေးပူနေတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးပါ
ဒီလိုချစ်သူမျိုးက သင်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ တွေးပူနေတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးပါ… သင်ကို အရမ်းချစ်ပြီး သင်ဘာပဲလုပ်လုပ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ချစ်သူမျိုး ရှိနေပြီလား…? တကယ်လို့ ရှိနေပြီး ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်ကို အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လောက်အောင်ကိုချစ်လို့ ဒီလိုတွေ စိတ်ပူနေတတ်တာပါ။ အဲ့လို သင့်အတွက်ကိုပဲ တွေးပူနေတတ်တဲ့ ချစ်သူရှိနေပြီဆိုရင် သူ့ကို အဆုံးရှုံး မခံလိုက်ပါနဲ့နော် …။ ဒီလိုချစ်သူမျိုးက သင်ကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ တွေးပူနေတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးပါ …။ (၁) သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ status လေးတစ်ခု တင်မိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ သူကျတော့ဘာလို့မပြောတာ လဲဆိုပြီး ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး …၊ (၂) ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သင်တင်မယ့် ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒါမတင်နဲ့ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး …၊ … Read more
ယနေ့မန္တလေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ (၁၉)နှစ်သမီးလေး မကြယ်စင်
ယနေ့မန္တလေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ (၁၉)နှစ်သမီးလေး မကြယ်စင် ယနေ့မန္တလေးမြို့တွင် သေဆုံးသွားသော ကြည်ထိ လူနာ၂ဦး ကိုမျိုးနိုင်လင်း အသက်(၃၉)နှစ် (ရင်ဘက်သေနက်မှန်ဒါဏ်ရာ) မကြယ်စင် အသက်(၁၉)နှစ် (ဦးခေါင်းသေနက်မှန်ဒါဏ်ရာ) #HHO Zawgyi ယေန႕မႏၱေလးမွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ (၁၉)ႏွစ္သမီးေလး မၾကယ္စင္ ယ​ေန႔​မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕တြင္ ေသဆုံး​သြား​ေသာ ၾကည္ထိ လူနာ၂ဦး ကိုမ်ိဳးနိုင္လင္း အသက္(၃၉)ႏွစ္ (ရင္ဘက္​ေသနက္မွန္ဒါဏ္ရာ) မၾကယ္စင္ အသက္(၁၉)ႏွစ္ (ဦး​ေခါင္း​ေသနက္မွန္​ဒါဏ္ရာ) #HHO
လင္းလင္းတို႔ကေတာ့ ဒဲ့ႀကီးေတြၾကည့္ဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းကို ခ်ျပလိုက္ၿပီ
Rocker ကြီးလင်းလင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် ဒေါက်တာမလေး ချစ်သုဝေနဲ့ အတူ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ သမီးလေး ခေတ်နဲ့ သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်ကြီးပါ…အကြမ်းစား rocke တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို ထိုးနှပ်လေ့ရှိတဲ့ သဘာဝအဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်…။ မကြာသေးမှီက ဆိုရှယ်မှာ အရမ်းကို ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ ကိုယုန်လေးရဲ့ MTV နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူဖြစ်ဖို့ အဆင့်မမှီဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ် ….လူတိုင်းဟာ မျက်မမြင်ပုဏ္ဍားတွေပါ ။ ဘယ်လိုမျိုးပဲ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက မြင်ကြပါစေ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်အရာမဆို သုံးတတ်ရင်ဆေးဆိုတာပါပဲ ။ ရှုထောင့်မတူလို့ အမြင်မတူတာ မှားတယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူးလေ ။ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် ကွာခြားချက်က ဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပါပဲ ။ … Read more